कोरोनाकै बीच खुल्याे संसारकै पहिलो अचम्मको म्यूजियम, जहाँ ऐतिहासिक वस्तु होइन, ‘खुसी’ पाइन्छ ! - Everest Dainik - News from Nepal
कोरोनाकै बीच खुल्याे संसारकै पहिलो अचम्मको म्यूजियम, जहाँ ऐतिहासिक वस्तु होइन, ‘खुसी’ पाइन्छ !
काठमाडौं । म्यूजियम अर्थात् संग्रहालय ।
म्यूजियमको नाम आउने बित्तिकै हामी ऐतिहासिक कालखण्डमा संग्रह गरिएको बस्तुहरु राखिएको स्थान सम्झिन्छौं । इतिहास हेर्न हामी म्यूजियम जाने गर्दछौ ।
तर संसारमा एउटा यस्तो म्यूजियम पनि छ, जहाँ कुनै ऐतिहासिक बस्तु हेर्न पाइदैन । बरु त्यहाँ खुसी पाइन्छ ।
हजुर, हामी कुरा गर्दैछौं द म्यूजियम अफ हेप्पिनेस को ।
यो म्यूजियमको उद्देश्य नै मानिसहरुलाई खुसी पार्नु हो ।
डेनमार्कको राजधानी कोपनहेगनमा खुलेको यो संग्रहालय कोरोनाकै बीच खुलेको हो ।
कोपनहेगनको हेप्पिनेस रिसर्च इन्स्ट्च्यिूटले यो म्यूजियम बनाएको हो । यसको कल्पना भने माइक वाइकिङले गरेका थिए । उनी संस्थाका कार्यकारी प्रमुख हुन ।
उनले खुसीसँग जोडिएका तीनवटा पुस्तक पनि लेखका छन । यी पुस्तकहरुमा द लिटल बुक अफ लेगे अर्थात ( लेखे भनेको खुसी), द लिटिन फुक अफ ह्यूगे (रमाइलो) र द आर्ट अफ मेकिङ मेमोरिज रहेका छन् ।
यो नयाँ संग्रहालयमा आठ कोठा रहेका छन् । यो २४० वर्गमीटरमा फैलिएको छ । सिएनएनका अनुसार, यो संसारको यस प्रकारको पहिलो संग्रहालय हो । यसलाई १८ औं शताब्दीमा बनेको एउटा ऐतिहासिक भवनको बेसमेन्टमा बनाइएको छ ।
के छ त म्यूजियममा
यो म्यूजियमको हरेक कोठा विशेष छन् । हरेक कोठामा हामी खुसीसँग साक्षात्कार हुन्छौं । साथै केही प्रयोग पनि हुने गर्दछन् । जस्तो कि एउटा कोठाको बीचमा पैसा भरिएको एउटा पर्स छ । हेप्पिनेस इन्स्टिच्यूटका अनुसन्धानकर्ताहरु यहाँ आउने दर्शकसँग बाटोमा पर्स हराएको कुरा गर्छन् । अनि कतिपटक यो पर्स फिर्ता पाइन्छ भनेर हेर्ने गर्दछन् ।
यसको एउटा भागमा हेप्पिनेस अफ साइन्स अर्थात् खुसीको विज्ञानका बारेमा काुराकानी हुन्छ । त्यहाँ दुई हजार वर्षको इतिहासका बारेमा बताइन्छ । यहाँसम्म कि एउटा भाग त सेक्सन अफ स्माइल अर्थात् मुस्कुराउने कोठा नै छ । यसमा मोनालिसाको मुस्कानलाई अलग अलग कोणबाट हेर्न सकिन्छ ।
म्यूजियममा रहेको एउटा कोठा खुशीको भुगोल भनेर राखिएको छ । यसमा २०२० को विश्व खुशी प्रतिवेदन राखिएको छ । फनल्याण्ड संसारको सबैभन्दा बढी खुसी देश हो भने स्वीडेन दोश्रो । अर्को कोठामा भने संसारमा खुसी छाएका केही पलहरु संग्रह गरिएको छ । यसैगरि हेप्पिेनस ल्याबमा हाम्रो मष्तिष्कमा राम्रा भावना कसरी आउँछन् भनेर देखाइन्छ । उमेरसँगै आउने अनुभूतिमा परिवर्तन पनि यहाँ देखिन्छ ।
गत मईमा उद्घाटन गर्ने भनिएपनि कोरोनाका कारण १४ जुलाई देखि मात्रै यो म्यूजियम सार्वजनिक गरिएको हो । पहिलो महिनामा मात्रै ६ सय जनाले भ्रमण गरेका छन् । कोरोनाका कारण भ्रमण भने कडा पारिएको छ ।
ट्याग्स: Happiness Mudeum